ERhawutini ukuya eLagos iinqwelomoya kwiSouth African Airways ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » ERhawutini ukuya eLagos iinqwelomoya kwiSouth African Airways ngoku
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • Iindaba zaseNigeria zokuPhula • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseMzantsi Afrika eziQalileyo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
ERhawutini ukuya eLagos iinqwelomoya kwiSouth African Airways ngoku.
Le ndawo ikhethekileyo ithatha i-SAA iye kwenye yezona marike zohambo zinkulu e-Afrika kwaye siyavuya kuba sikwazile ukuphinda siqalise ukusebenza, sibonelela ngekhonkco phakathi kowona qoqosho lukhulu lwase-Afrika.
Ukuqala nge-12 kaDisemba, 2021, i-South African Airways (SAA) iza kongeza enye indlela yelizwekazi ebalulekileyo kuthungelwano lwayo ngenqwelo moya ephuma kathathu ngeveki.
Rhawutini ukuya eLagos eNigeria. I-SAA ibibhabhela isiya eNigeria kule minyaka ingama-23 idlulileyo kwaye ukuqaliswa kwakhona kwale nkonzo kulucelomngeni olwamkelekileyo kuthungelwano olukhulayo kwilizwekazi lase-Afrika.
“Le ndawo ikhethekileyo ithatha i-SAA iye kwenye yezona marike zohambo zinkulu e-Afrika kwaye siyavuya kuba sikwazile ukuphinda siqalise ukusebenza, sibonelela ngekhonkco phakathi kwawona mazwe mabini qoqosho mkhulu e-Afrika,” utshilo uThomas Kgokolo, iCEO yeThutyana yeSouth African Airways. Ukuqaliswa kwakhona kwenkonzo phakathi Rhawutini kwaye iLagos iyinxalenye yesicwangciso-qhinga se-SAA sokukhula kancinci kancinci, eqalise kwakhona ukusebenza ngokupheleleyo ngoSeptemba kwiindlela zalapha eMzantsi Afrika nakwiindlela zengingqi yase-Afrika.
“Injongo yethu kukuqhubeka nokuphuhlisa uthungelwano lweendlela zethu eziqhutywa yimfuno yabakhweli kunye nengeniso enokubakhona. Sithe gqolo siwavavanya amathuba kwiimarike zasekhaya, zengingqi nezamazwe ngamazwe,” wongeza ngelitshoyo uKgokolo.
Akunjalo nje entsha Rhawutini-Indlela yaseLagos isebenza njengekhonkco lezorhwebo kunye nezoqoqosho phakathi kwala mazwe mabini kodwa iya kunceda imarike yokhenketho ekhulayo kumazwe omabini. I-SAA iza kuqhubeka ngentsebenziswano noKhenketho loMzantsi Afrika ukukhuthaza ilizwe laseNigeria ngethemba lokuba iza kuvelisa abatyeleli abaninzi ngoku njengoko kuhlaziywa izithintelo zokuhamba ngobhubhani wamazwe ngamazwe.